Sida loo socodsiiyo Android Apps on Windows Phone
Haddii aad hore u isticmaalay Android ama arrimo ka hor, waa in aad ku ogaaday in koobaa ah oo waayo-aragnimo user telefoonada Windows waa fudud la ekaan. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo Microsoft ayaa had iyo jeer u gacan galaan suuqa PC ah, waxa aanu ku raaxaysan sumcad u dhigma ee dunida ka mid ah telefoonada gacanta. Sababta ugu weyn ee ka dambeysa ay tani tahay wax dareen ah ka muujiyey horumarinta app madal ay ku wajahan. Waxaan maalin walba arki badan oo dadka isticmaala Windows Phone ee forums, dubbeyn ku saabsan la'aanta ah ee xitaa yar, barnaamijyadooda loo baahan yahay in ay u baahan yihiin ee hawlaha maalin kasta, sida Google Maps.
Bal qiyaas waxa ay noqon doonto sida haddii aynu yaabaa barnaamijyadooda Android telefoonka Windows ah. Waxaanu isu laga yaabaa qaybta ugu wanaagsan ee Windows, waayo-aragnimo user iyo kamaradaha-dhamaadka sare ee Phones sida Lumia ah, oo leh kumanyaalka reer Chine Android qabow ka jira. Taasi fiicnaan lahaa. Waa hagaag, waxaan injiilka waa idiin - tani waa mid aad u suurto gal ah oo ay tani tahay waxa aan doonayaa inaan idin tusin.
Orod barnaamijyadooda android on Windows phone 8/10
Top 10 barnaamijyadooda Android for Windows Phone users
1. aad Windows Phone, u tag Settings , maraan si aad u cusboonaysiiso & ammaanka oo ka dibna si loogu talagalay horumarinta . Sahlo Horumarinta Mode
2. Waxaad hubisaa in qalab aad diyaar u ah Discovery si aad u qalab kasta oo kale ee isticmaalaya code labo ka mid ah xubnuhu kartaa telefoonka. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo la socota Discovery Device slider u ku booska
3. In uu furmo suuqa isla, hoos u rogto iyo riix Labo Xidig badhanka si aad u hesho code labada ciyaaryahan. Ku qor hoos meel.
4. aad PC, Download ku qalab Connect halkan ka , ka dibna SDK android ee qalab adb halkan
5. soosaaray files bixi in folder isticmaalaya software ah sida WinRar
6. fur folder wconnect iyo rakibi labada IpOverUsbInstaller.msi iyo vcredist_x86.exe
7. Isku aad telefoon si aad u computer via USB
8. Run Command degdeg ah sida Administrator ka Menu Start
9. beddel buuga meesha wconnect.exe waxaa laga helaa oo ay inputting cd C: \_ Users \_ Yourusername \_ Downloads \_ Folderthatcontainswpconnect
10. Press galaan
11. Nooca wconnect.exe iyo saxaafadda galaan
12. Ku qor code ka garab in aad hore u xusay haddii la weydiiyo ka
13. Hadda bedeli buugga ee qalabka adb by khaanada soo socda in amarka dhakhso ah cd C: \_ Program Files (x86) \_ android-sdk \_ madal-qalabka
14. Si aad u rakibi app kasta, nuqul ay APK soo gudbin buugga folder adb iyo nooca adb rakibi ku xiga magaca app. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad si loo soo dajiyo Explorer adag, waxaad ku qor lahaa adb rakibi pl.solidexplorer2-2.0.11-100044-minAPI16.apk oo ka dhacay galaan
Si aad u laado wax off, waxaan heysanaa PiKtures, app gallery nadiifsan oo ugu quruxda badan ee aad waligaa heli karto. Codsigan abaabuli doonaa sawirada galalka kala duwan si aad eegi kartaa iyada oo sawir walba fudayd. Waxa kale oo ay ugu rarataan culaysyo ilaa sawiro aad aad u degdeg ah oo aad u shaandhayn kartaa sawir kasta oo ay meel u gaar ah. Waxa kale oo jira taariikh-qore muujinaya marka kasta oo sawirada aad loo qaaday si ay u caawiyaan in aad xasuusato ee la soo dhaafay oo la arko waxa aad sameyneysay maalintaas u gaar ah.
Codsigan nadiifiso doonaa kaydinta daruur iyadoo la fogeynayo files nuqul oo aan loo baahnayn. Ilaa hadda, ugu storages daruur oo kaliya in lagu taageeraa waa WordPress iyo Google Drive laakiin ku dhiirigelinayaan in uu ka shaqeyneynaa codsanaya dheeraad ah mustaqbalka. Tani waa weyn oo loogu talagalay dadka u baahan dulmar aasaasiga ah ee kaydinta daruur iyo si aad u aragto waxa ay kor ugu badan ee ay kaydinta la isticmaalayo.
Liveboot u baahan yahay xidid laakiin haddii aadan haysan xidid, tani waxay noqon doontaa codsi ah in aadan u baahan tahay, laakiin aad u badan tahay doonayaan. Tani waxay ku tusi doonaa animation ah waxa ka socda marka aad telefoon waxaa ay kor u booting nidaamka oo idil. Sidaas, marka aad guji guuleysatey ama marka aad ee ciiyaarta ku saabsan telefoonka, aad asal ahaan ka heli sida kooban ee waxa ka socda ee code. Ma iska cad in aad wada akhridid ​​doono laakiin waxa ay u muuqataa mid weli qabow, sababtoo ah waxa ay taasi sida Hackers ama Tababaraha ah aad dareento.
Waa codsiga ugu horeeyay ee ha kuu soo ordi codsi kasta oo ay si aad u computer aad dhex Google Chrome. Waxaad ordi karaan Instagram, Twitter, ciyaaraha iyo codsi kasta oo aad u isticmaali lahayd ee saxda ah maalin kasta ku salaysan ee aad laptop. Waxay leedahay arrin qalooca waxbarashada yaacday ah laakiin xaqiiqo ah u qalantaa.
5. YouTube abuura Studio
YouTube abuura Studio waa codsi rasmi ah YouTube ee aad u maamuli lahayd YouTube channel on go ah. Tani waa hab fiican si aad u aragto tirakoobka aad gorfaynta iyo updates in aad channel haddii aad videos. Waa maxay weyn oo ku saabsan codsigan waa sida fudud interface waa in ay isticmaalaan.
Cram waa codsi hawadda image ah si loo yareeyo tirada sawiro aad sidaa ma qaadan doonaa meel bannaan oo aad u badan ee aad taleefan. Maalmahan, sawiro in aad qaadato ku saabsan telefoonka waa sida caadiga ah 2 ilaa 5 MB ee size, taas oo aan loo baahnayn weyn. Iyadoo app this, aad uma baahna inay walwalo size la arrin. Tayada image iyo dhinacyada oo dhan isla joogo. Waxa kaliya ee ay isbedesho waa size ka MB in KB.
7. Madaxda up
Madaxda ilaa waa codsi weyn oo idin tusiyo farriimaha aad adigoo isticmaalaya calan. Waa wax weyn ee xaaladaha marka aad arki kari maayo xaaladda aad bar, sida markii uu daawaday video ah. Marka aad ogeysiin ah, waxaa arbushin doonaa sida calan, taas oo aad u faa'iido badan. Waxaa sidoo kale soo bandhigay ee farriimaha balaariyay si aad u tirtiri kartaa, guuraan, nuqul oo la macaamilaan farriimaha ka sokow iyaga nadiifinta.
8. dadban caajiska
Fikradda si dadban caajis waa in aad menu keeni kartaa ilaa laga soo codsi kasta. Waxaad billaabi karaa codsiyada aad soo dhaafay, codsiyada aad jeceshahay oo aad toggle karaa bedeley sida Wi-Fi, Bluetooth, iwm Wax walba ah habsami u shaqeeyo iyo keebka waxaa lagu qori karaa meel kasta oo dhinac ka mid ah shaashadda. Tusaale ahaan, waxaad u tagi kartaa on your toosh ka codsi kasta, daadsanaanta hareeraha la nuurka ama loo baddasho Instagram aan la yaraynayo YouTube.
Frontback kuu ogolaanayaa inaad qaado sawir leh camera hore oo kale leh camera dhabarka iyo tan ugu muhiimsan, iyaga iyo image hal wadaagaan. Waa hab weyn oo u sheegay qof waxa aad samaynaysid oo muujinaya dareenkaagu in shay sawirka la mid ah. Waxaa jira in ka badan hal milyan oo dadka isticmaala oo aad ka arki kartaa dadka kale sawiro iyo xitaa jeclaan iyo faallo iyaga on.
Sababta sababta ay tani waa sida lagu ciyaaryahan music cajiib ah, in my opinion waxaa sabab u ah Customization in aad samayn karto. In goobaha, waxaad bedeli kartaa sida bogga ugu weyn ee u muuqataa, habayno tabs category iyo sidoo kale beddeli theme midabka guud. Waxaad ku dari kartaa arts oo dhanba music oo albums oo xitaa dhigay saacad hurdo habeenkii. Waxaan xaqiiqo ah talinaynaa hubinta this maqnaan dhan idinka mid ah oo ku raaxaystaan ​​dhagaysiga muusigga.
> Resource > Windows > Sida loo Android Apps on Windows Phone